Iingcebiso ezine zokuNyanga ukuqhinwa kwaBantwana | IBezzia
Iingcebiso ezine zokuNyanga ukuqhinwa kwaBantwana
UMaria Jose Roldan | 09/04/2021 22:00 | Yonyana wakho
Ukuqunjelwa yingxaki eqhelekileyo yokwetyisa ebantwaneni. Khumbula ukuba amathumbu akho asakhula kwaye kuyinto eqhelekileyo, ke ngoko, ukuba amaxesha ngamaxesha inika ingxaki enjalo ukuba ayigqibi ukufunxa izondlo ezahlukileyo kukutya kakuhle. Into eqhelekileyo kukuba oku kuqunjelwa kungasombululwa ngaphandle kweengxaki ezininzi kwaye kunyamalale njengoko kuye kwafika.
Nangona kunjalo, ukuba ukuqhina kuhlala ixesha elingaphezulu kwexesha, kubalulekile ukuba ubonane nogqirha ukuze ajonge ukuba unalo naluphi na uhlobo lwezifo. Emva koko sicebisa uthotho lwamayeza okanye iingcebiso ezinokunceda omncinci ukusombulula ingxaki yakhe yokwetyisa.
1 Yandisa ukutya kwakho ifayibha
2 Sela amanzi amaninzi
3 Yenza umdlalo
4 Ukungeniswa kweemveliso zobisi ezinegwele
Yandisa ukutya kwakho ifayibha
Ifayibha ibalulekile kwaye ibalulekile xa kufikwa ekuthinteleni umntwana ekuhluphekeni ngenxa yokuqhinwa. I-Fibre ayinakusilela ekutyeni komntwana kwaye kufuneka ithathwe rhoqo kuzo zonke izidlo. Ikhona kwiziqhamo ezifana ne-apile okanye i-kiwi, kwimifuno okanye kwiisiriyeli. Ngokwesiqhelo, ukutya ukutya okunefayibha kunceda ukuphela kweengxaki zokuqhinwa.
Enye yezinto eziphambili xa kufikwa ekuthinteleni umntwana ekuhluphekeni kukuqhinwa kukusela amanzi imini yonke. Kubaluleke kakhulu ukuba umntwana ahlale efumana amanzi afanelekileyo ngalo lonke ixesha kwaye ungabonisi ukungabikho kwamanzi. Ukufunxwa kwamanzi kunceda isitulo sithambe kwaye kungaphuma ngaphandle kwengxaki. Isiselo esinconyelwayo kufuneka ibe ngamanzi, ukuselwa kweziselo ezineswekile okanye iijusi akunconywa kuba kunganikeli nto ilungileyo emzimbeni.
Ukuzilolonga rhoqo kuthintela ukuqhina. Ukusebenza ngokwasemzimbeni kunceda ubunzima belindle ukuba lihle emathunjini ngaphandle kwengxaki kunye nokugxotha isitulo ngendlela eyonelisayo. Ukongeza koku, ukuziqhelanisa nemidlalo kubalulekile ukuba umntwana azive kamnandi ngaye kwaye aphephe iingxaki zekilo ezongezelelweyo.
Ukungeniswa kweemveliso zobisi ezinegwele
Esinye sezizathu zokuqunjelwa ebantwaneni kunokuba ngenxa yokunqongophala kweprobiotic kwinkqubo yokwetyisa. Ezi bhaktheriya zikhona kukutya okunotyiweyo kwaye zinceda ukufunxa izondlo ezahlukileyo ezifumaneka ngaphakathi kwendlela yokwetyisa.
Ngokubanzi, Ukuqunjelwa ebantwaneni kusonjululwa ngokulandela olu luhlu lweengcebiso okanye amayeza endalo. Nangona kunjalo, kusenokwenzeka ukuba ingxaki iyaqhubeka ngaphandle kokulandela loo ngcebiso. Ukuba oku kuyenzeka, abazali kufuneka baye kugqirha bayokufumanisa unobangela wokuba ukuqhina kuqhubeka okanye kuqhubeka kwaye ukusuka apho, benze eyona ndlela ifanelekileyo. Kwiimeko ezinjalo, umntwana usenokubandezeleka ngohlobo oluthile lwesifo esimthintelayo ekubeni angahamba ngendlela eqhelekileyo yamathumbu. Le ngxaki yokwetyisa ihlala isonjululwa ngokuhambisa amachiza athile anceda inkqubo yokwetyisa ukuba ilunge. Ngaphandle koko, omncinci unokufumana iziqendu zokuqunjelwa ngokuqhubekekayo nazo zonke izinto ezimbi ezibandakanya inqanaba lezempilo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: IBezzia » Oomama » Yonyana wakho » Iingcebiso ezine zokuNyanga ukuqhinwa kwaBantwana
Senza udliwanondlebe neZero Waste, ivenkile yakho ekwi-intanethi ubomi obuzinzileyo
Izityalo ezi-5 ezinde zangaphakathi ukuhombisa iikona zekhaya lakho